Warbixin Ergeyga Xuquuqal Insaanka U Gudbisey UN-ka Oo Lagu Sheegay In Ciidamo Somali Ah La Dagaalameen Tigrayga - Xogside-news Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALI NEWS Warbixin Ergeyga Xuquuqal Insaanka u gudbisey UN-ka oo lagu sheegay in ciidamo...
Warbixin Ergeyga Xuquuqal Insaanka u gudbisey UN-ka oo lagu sheegay in ciidamo Somali ah la dagaalameen Tigrayga
Qoraalka uu soo saaray ergeyga qaramada midoobay ayaa ereyadii ku qornaa waxaa ka mid ah;
“Marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha ciidamada Eriteriya dagaalka Tigreega, wakiilka gaarka ah wuxuu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino sheegaya in askarta Soomaalida laga raray xeryihii tababarka militariga ee Eritrea lana geeyay jiida hore ee Tigreega, halkaas oo ay ku wehlinayeen ciidamada Eritrea markii ay ka gudbayeen Ethiopia soohdinta.
“Sidoo kale waxaa ixtiraam mudan in ciidamada soomaalida ah ay joogeen agagaarka magaalada Aksum. Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay ka qeyb qaadashada askarta Soomaaliya ee dagaalada Tigreega, waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay ka dalbadeen madaxweynaha Soomaaliya sharaxaad ku saabsan halka ay ku dambeeyeen ciidamadii Soomaaliya ee loo diray Eritrea. Ergeyga gaarka ah waxaa lagu wargaliyay in guddiga arimaha dibada iyo difaaca ee baarlamaanka ay u yeereen madaxa dowlada si ay ugu diraan Asmara wafdi xaqiiqa raadis ah si baaritaan loogu sameeyo.”
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland oo mudanayaasha Golahaasi ka dalbaday in ay meelmariyaan xeerar kala duwan oo golahaasi horyaala
Next articleu Jeedada Wafdi ka socda Sacuudi Carabiya Ee Muqdisho yimid